Nhau - Mazano ekuti ungashandise sei iyo miviri mitsetse yekudonhedza tepi yekudiridza!
1.Kana kudonhedza tepi yekudiridza inoshandiswa pasi peiyo yekurima firimu, nekuda kwechiedza chezuva, pamusoro pemvura inozobuda, uye inozonamira mumadonhwe madiki emvura mufirimu rekurima. Aya madonhwe emvura madiki anozoita lens. Pasi pemamiriro akakodzera uye wezuva mamiriro, madonhwe emvura Kutarisisa kwema lens kunogadzira nzvimbo inopisa, iyo inopisa iyo tepi yekudonha kana kupisa gomba diki. Kudzivirira rudzi urwu rwechinetso kusaitika, matanho anotevera anofanira kutorwa kana uchiishandisa:
Shandisa rima mulch firimu, dema mulch firimu ndiyo yakanakisa, kana iwe ukashandisa yakajeka mulch firimu, iwe unofanirwa kuviga iyo tepi tepi zvakadzika kana kufukidza iyo mulch neyakaonda hutete hwevhu kudzivirira chiedza chakasimba kuti chipinde mukati me mulch firimu.
Paunenge uchishandisa, chengetedza ivhu repasi zvakanyanya sezvinobvira, woisa huwandu hwakafanira hwehuswa husati hwamera sora muvhu usati wadyara kudzivirira masora kubva mukukura kana matombo evhu kubva mukusimudza mulch, zvichikonzera mhute yemvura kuunganidzwa mumucheka uye gadzira madonhwe madiki emvura.
2. Tupukanana tupukanana tunofanira kumwaya mushonga wakakodzera wezvipembenene kana zvirimwa zvichikura, uye mishonga inouraya zvipembenene inofanirwa kuurayiwa nenguva kudzivirira zvirimwa uye kudonhedza mabhandi emadiridziro kubva pakurumwa nekukuvara.
3. Kana tepi yemadiridziro ikaiswa nemuchina, zvinodikanwa kudzivirira iyo tepi yekudiridzira tepi kuti isatswe uye kumanikidzwa nemuchina.
4. Kana uchiisa tepi yemadiridziro, divi rine anodonhedza rinofanira kunge rakatarisa kumusoro, uye simba rinofanirwa kunge rakafanana kana rakatambanudzwa, uye tepi yekudiridza yekudonha inofanira kuchengetwa yakatwasuka.
5. Mashini ekurima mashini haatenderwi kuyambuka munda, uye zvinorambidzwa kuti michina nezvipfuyo zvipwanya kana kutsika pabhandi redrip rekudiridzira.
6. Iyo yekudonha mvura yekudiridza inopinda mudrip yekudiridza bhandi inofanirwa kugadziriswa nefirita system inopfuura 100 mesh.